Saujannya Subba - Nepali Actress /model
Topic: Saujannya Subba - Nepali Actress /model
Author Topic: Saujannya Subba - Nepali Actress /model (Read 6939 times)
« on: February 19, 2010, 11:34:47 AM »
'बिहान दूध र साँझ सुप पिउँछु'
शुक्रवार, 19 फेब्रुअरी 2010 10:48 नागरिक
अभिनेत्री सौजन्य सुब्बाको राइट च्वाइस
१. शरीरलाई न्यानो बनाउन के पिउनुहुन्छ?
बिहानको जाडोबाट बच्न दूध पिउँछु। साँझमा चाहिँ सुप नै ठिक लाग्छ।
२. पढ्नुपर्‍यो भने कुन लेखकको कृति रोज्नुहुन्छ?
अहिले त जगदीश घिमिरेको 'अन्तर्मनको यात्रा' पढिरहेकी छु। फिल्म खेल्न थालेपछि पढ्ने फुर्सद एकदमै कम हुँदो रहेछ। मलाई 'फिक्सन'ले नै आनन्द दिन्छ।
नेपालमा घुम्नका लागि सल्लाह दिने थुप्रै ठाउँ छन्। ती मध्ये पनि जोमसोम मलाई विशेष लाग्यो। त्यहाँको फोटो देख्दा नै म मोहित भएको थिएँ, पुग्दा त स्वर्ग पनि योभन्दा राम्रो हुँदैन होला जस्तो लाग्यो। यातायात सहज भए यो ठाउँको महत्व निकै बढ्थ्यो।
बास्केटबल र टेनिस होला। कलेज पढ्दा निकै खेलियो। अहिले पनि मौका मिल्दा खेल्न पछि पर्दिन।
मलाई त नेपाली खाना नै सबभन्दा मन पर्र्छ। पास्ता पनि मीठो लाग्छ।
६. अहिले कुन गीतले तपाईंको मनलाई आनन्द दिन्छ?
म त 'स्याड सङ'मा रमाउँछु। मुड रोम्यान्टिक भए पनि रोजाइमा यस्तै गीत पर्छ। अहिले अञ्जु पन्तको 'हाँस्नलाई ओठ खोली' भन्ने गीत सुनिरहेकी छु।
७. टिभी कार्यक्रम कुन मन पर्छ?
त्यस्तो स्पेशल त केही छैन। रिमोट घुमाउँदै जाँदा जुन मनपर्छ त्यही हेरिन्छ। फिल्म गसिप र म्युजिक कार्यक्रम बढी हेर्छु।
८. धेरैजसो कुन वेबसाइट हेर्नुहुन्छ?
९. प्रायः कुन रङको लुगा लगाउनुहुन्छ?
मलाई सेतो रङ मनपर्छ। सेतो ड्रेसमा रहँदा आफूलाई कुल र फ्रेस फिल हुन्छ।
१०. काठमाडौंमा बस्नलाई कुन एरिया ठीक हो?
जावलाखेल। काठमाडौंभन्दा शान्त र सफा छ यो ठाउँ। धुवाँ धूलोको प्रदुषण कम छ। मौसम खुलेको बेला कोठाबाटै हिमाल देखिन्छ।
११. काठमाडौंमा कुन सवारी साधनमा यात्रा गर्नुहुन्छ?
स्कुटी नै ठिक लाग्छ।
१२. शनिबारको बिदा कसरी बिताउनुहुन्छ?
साथीभाइ र आफन्तसँग ग्यादरिङ गरेर मनाउँछु। छुट्टीमा म हम्मेसी बाहिर निस्किन्न।
« Last Edit: February 28, 2015, 02:12:08 AM by tundikhel »
Re: Nepali Actress - Saujannya Subba
« Reply #1 on: February 24, 2015, 03:38:59 PM »
हिरोइनका कारण पूर्व प्रधानमन्त्रीको घरमा डिभोर्स
पैसा र प्रेमले गर्दा पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको घरमा भाँडभैलो मच्चिएको छ । बुढेशकालमा पार्टीभित्र उग्र झगडामा फसेका चन्दका छोरा भुपेन एक हिरोइनसँगको चक्करमा फसेपछि घरमा कलह बढेको छ । फिल्म क्षेत्रमा समेत लागेका भुपेनले नायिका सौजन्य सुब्बालाई दोस्री श्रीमतीका रुपमा घरमा भित्र्याएपछि उनकी पहिली श्रीमती अमृत सिंहको रुवावासी भएको छ ।
अमृतसँग उनले सम्पत्तिका लागि विहे गरेका थिए । नेपाल सेनाका पूर्व जर्नेल तोरणबहादुर सिंहकी छोरी अमृतलाई परिवारले टन्न सम्पत्ति दिएको थियो । पहिले बिहे एक भारतीय ब्यापारीसँग गरेकी उनले ती ब्यापारीसँग डिभोर्स भएपछि भुपेनसँग दोस्रो विहे भएको थियो ।
अमृतको नाममा छाउनीमा जग्गा थियो । विहेपछि सोही जग्गा ५ करोडमा बेचेर भुपेनका लागि गाडी र भैसेपाटीमा घर किनेकी थिइन । सोही घरमा दुवै जना बस्दैं आएका भुपेन सौजन्यसँग लागेपछि उनीहरुबीच विवाद बढेको थियो । पटक-पटक विवादमा तानिएकी सौजन्यसग विहे नै गर्ने निर्णयमा भुपेन पुगेपछि उनीहरुको डिभोर्सको स्थितीको आएको हो । सौजन्य यतिबेलवा अमेरिका छिन ।
भुपेन पनि सौजन्यसँग विहे गरेर बस्ने योजनासहित अमेरिका जाने तयारीमा छन ।
दोस्रो विहे पनि असफल भएपछि अमृत भने विरक्तिएकी छिन । भैसेपाटीको घर पनि छाडेर उनी पछिल्लो समय वालुवाटारमा बस्न थालेकी छिन । भुपेन र अमृतको एक छोरी छन । करिब तीन वर्ष लामो विवादपछि उनीहरु छुट्टएिका हुन । पहिलो श्रीमान सरोजसँग डिभोर्स गरेकी सौजन्य त्यसपछि डन पृष्ठभूमी बोकेका रोज राणाका प्रेमिका बनेकी थिइन ।
राणाले बनाएको फिल्ममा पनि उनी खेलिन । रोजसँगको सम्बन्ध बिग्रदैं गएपछि सौजन्य भुपेनसँग नजिकिएकी थिइन । त्यसपछि भुपेन र अमृतबीच विवाद बढ्दैं गयो । सो घटनाले भुपेन र रोजबीच पनि झगडा भएको थियो । भुपेनसँग लागेपछि सौजन्यले रोज विरुद्ध ललितपुर प्रहरीमा उजुरी गरेर पक्राउ गराएकी थिइन । आजको दृष्टि साप्तहिकमा खवर छ ।
Re: Saujannya Subba - Nepali Actress /model
« Reply #2 on: April 21, 2015, 09:03:12 AM »
saujanya subba 11.jpg (496.48 kB, 1200x1600 - viewed 184 times.)
« Last Edit: April 21, 2015, 02:08:18 PM by anand »